Tetibola 2019: andrasana ny tolo-kevitry ny minisitera rehetra | NewsMada
Tetibola 2019: andrasana ny tolo-kevitry ny minisitera rehetra
Miara-mivory, anio sy rahampitso, ny solontenan’ny minisitera sy ny andrimpanjakana rehetra ho fiomanana amin’ny fanamboarana ny tetibolam-panjakana 2019 asiam-panitsiana, araka ny fiantsoan’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola azy ireo. Raisina ny tolokevitra avy amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny momba ny tokony hamaritana ny tetibola vaovao amin’ity 2019 ity, indrindra ny mahakasika ireo fandaharanasa novolavolain’ireo minisitera sy ny andrimpanjakana samihafa.
Tsy maintsy faritana mazava mifanaraka amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ao anatin’ny IEM ny tetibola hoenti-miasa, koa zava-dehibe izao fihaonana izao hanoritsoritana ny tetibolam-panjakana, araka izay laharam-pahamehana. Araka ny tetiandro, tsy maintsy haroso eo anivon’ny filankevitry ny minisitra mialoha ny 17 avrily 2019 izay volavolan-dalàna momba izany tetibola asiam-panitsiana izany.
Tsy fantatra, ahoana ny fomba handravonana ny hevitry ny rehetra sy ny hampifandrindrana ny asa atao avy amin’ny tetibola novolavolaina? Inoana fa avy amin’ny teknisianina mahafehy sy mahafantatra tsara ny minisitera sy ny andrimpanjakana ny tolo-kevitra ho tombontsoan’ny firenena.